सेनालाई मुलुक प्यारो की - सांसद र नेताहरू ? संविधान ठुलो की मुलुक ?
सेनालाई मुलुक प्यारो की – सांसद र नेताहरू ? संविधान ठुलो की मुलुक ?
Team Khabar सोमबार, आषाढ ०१, २०७७
मुलुक भन्दा ठुलो संविधान होइन संविधान फेरि पनि बन्न सक्छ । सेनाहरुका लागी मुलुक प्यारो की ? राजनीतिक दलहरूका भ्रष्ट र मुलुकलाई ध्वस्त गर्ने नेताहरू प्यारो ?
माओवादीहरुले पनि द्वन्द कालमा नेपाली सेनाहरुलाई सिध्याउन खोजेको नै हो । हाल आएर पनि मन्त्री र नेताहरूले कहिले सेनाहरुको संख्या कम गर्ने भन्छन् , कहिले सेनाहरुको रेन्जर गण हटाउनु पर्ने वा खारेज गर्ने भन्छन् । आखिरमा गर्न खोजेको के ?
जुनसुकै मुलुकमा पनि मुलुकको हित र रक्षाका लागी सेनाहरु महत्त्वपूर्ण अंग र शक्तिका रूपमा गनिन्छ । तर हाम्रो मुलुकमा भ्रष्ट मन्त्री र नेताहरुद्वारा विभिन्न किसिमबाट सेनाहरुलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ।
स- साना कुराहरूलाई पनि अब सेनाहरुले गम्भीरतापूर्वक नलिएमा विश्वमा नै नेपालको सेना बदनाम हुने स्थिति आउन सक्छ।
सेनाहरुले थाहा पाउनुपर्ने कुरा मुलुक भन्दा ठूलो संविधान होइन । संविधान फेरि पनि बन्न सक्छ । मुलुकमा के सहि भइरहेको के गलत भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । तपाईंहरु आफै भन्नुस् के प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरू संविधान बमोजिम चलेका छन ? हाम्रो मुलुकमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको सहि सदुपयोग भएको छ र ? नागरिकहरुले सहि काम गर्नका लागि प्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचनमा चुनेर पठाएका हुन् । जनताबाट निर्वाचित हुँ भन्दैमा दुरुपयोग र मनपरि गर्न पाइन्छ ? कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा दुरुपयोग गर्नेहरुले अरु समयमा के बाँकी राख्लान ?
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण जारि गरिएको लकडाउनको समयमा अर्वौको भ्रष्टाचार, सत्ता लिप्सा र सत्ता परिवर्तनको खेल सहि हो ? के जाति गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भने जस्तो। यस कारण मुलुकको हित भन्दा ठुलो संविधान होइन यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।
बाहिरी मुलुकहरुमा सेनाहरुको लागि मुलुकको स्वाधीनता र अस्मिता भन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन ? सेनालाई राजनीतिसंग सरोकार नै रहदैन । तर नेपालमा सेनाहरु पनि राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता र सदस्य भए सरोबर नै छ।
कोरोना भाइरसको महामारीमा समेत स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी र स्वास्थ्य सामग्री चोरी गर्न नछाड्नेहरुले अन्य समयमा मुलुकसंग गद्दार गर्न के बाँकी राख्लान ?
बाहिरी मुलुकमा सेनाहरु मुलुकको स्वाधीनता प्रति मात्र जिम्मेवार हुन्छन । विक्रम सम्वत २०५२ साल देखि आजसम्म मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट चल्दै आइरहेको छ । हाम्रो मुलुकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको कारण मुलुकको स्वाधीनता धरापमा पर्दा पनि सेनाहरुको आस्था दलहरू प्रति मात्र देखिन्छ ।
हाम्रो मुलुकमा लुटनकै लागि गणतन्त्र ल्याइएको हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ । आफ्नो कार्यकर्ताहरु र नाता, गोता, पाल्न र लुटनका लागि संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याइएको हो । तर हाम्रो मुलकका लागि संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली घातक छ । यसकारण प्रदेश सरकारहरु र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।
सेनाहरुको लागि मुलुकको स्वाधीनता र अखण्डता भन्दा ठुलो र प्यारो राजनीतिक दलहरूका नेताहरू हुन् र ? कोरोना भाइरसको महामारीमा मुलुकमा संकट परेको बेला मुलुक भन्दा ठुलो सत्ता लिप्सा, सत्ता स्वार्थ र सत्ता परिवर्तनको खेल भइरहँदा पनि सेनाहरु चुप बस्न सुहाउछ ?
अब सेनाहरुले जंगी अड्डा, पृतना, गण र गुल्म हरुको नाम परिवर्तन गरि नेकपा पृतना, कांग्रेस पृतना, माओवादी पृतना, राजपा पृतना, माले पृतना, राप्रपा गण, साझा गण, विवेकशील गण, बाममोर्चा गुल्म र मजदुर किसान गुल्म आदि आदि जस्ता नामकरण गरे फरक नपर्ने देखिन्छ ।
सर्वसाधारणहरुलाई मात्र लकडाउन कायम भयो । लकडाउनको समयमा पनि मन्त्री र नेताहरूलाई खुमलटार, कोटेश्वर, भैसेपाटी र बालुवाटार आवतजावत गर्न कुनै रोकटोक भयो र ? मन्त्रीहरुलाई मन्त्री परिषद बैठक, सांसदहरू लाई प्रतिनिधि सभा बैठक, स्थायी समिति बैठक र सर्वदलीय बैठक बस्न जान आउन पनि छुट थियो नि ?
संंविधान त समय अनुसार परिमार्जन हुने वस्तु हो, यसकारण सबै नेपाली नागरिकहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा मुलुक भन्दा ठुलो संविधान होइन ।
प्रहरी चौकीभित्रै आठबिसकोट नगरपालिकामा वडाध्यक्षहरुबीच…
माया किन मोडियो मिउजिक भिडियो…
प्रचण्ड-नेपाल छातीमा ‘हामी यहाँ छौं’…
सेती भिरबाट लरी खस्दा तीनजनाको…
“मैले बामदेव र बादलको साथ…
जनतासमक्ष जानुपर्ने अवस्था सिर्जना होला…
प्रहरी चौकीभित्रै आठबिसकोट नगरपालिकामा वडाध्यक्षहरुबीच नै कुटाकुट
माया किन मोडियो मिउजिक भिडियो भोलि2गते रिलिज हुँदै
प्रचण्ड-नेपाल छातीमा ‘हामी यहाँ छौं’ टाँसेर माइतीघरमा बसे (तस्बिरहरू)प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न माग
सेती भिरबाट लरी खस्दा तीनजनाको मृत्यु
जनतासमक्ष जानुपर्ने अवस्था सिर्जना होला भन्ने अनुमान हामी कसैलाई पनि थिएन
अमेरिकी नाटक घर “थिएटर अफ न्यू योर्क “मा नेपाली मूलका कलाकार ओम राज राउतद्वारा अभिनित नाटक
आठबिसकोट नगरपालिकामा तेक्वान्दो डाेजाङ्गको खेलाडिहरु लाई गरे राहत बितरन
आठबिसकोट नगरपालिकाको पहलमा बने2पाइलट
रुकुम पश्चिममा १४ हजार बढि वेरोजगार सुचिकृत, छैन सबैले रोजगारी पाउँने ग्यारेन्टी
ए.पी.टु मिडिया प्रा. लि. द्वारा संचालित
सम्पादक : गोपाल बटाला
: बिबेक खड्का
व्यवस्थापक : भिम बहादुर कार्की